'शेयर बजारमा सुधार भइसक्यो, अब लगानी गर्ने बेला' (भिडियो संवाद)
जगन्नाथ दुलाल बिहिबार, जेठ ९, २०७६, ०५:२०:००
नेपालको बर्तमान पुँजी बजारको अवस्था कस्तो छ ?
पछिल्लो अवस्थामा नेपाली पुँजी बजारमा सेयरको कारोवार बढि भईरहेको छ । विशेष गरी बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुको बढि कारोबार भइरहेको छ । नेपालका केहि बैंक, हाईड्रो पावर,सिमेन्टहरुको कारोवार सुधारोन्मुख छ ।
यहाँले शेयर कारोबार बढिरहेको छ भन्नुभयो । बढ्नुको कारण के हो ?
हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिममा कम्पनीहरुले नाफा वितरण गर्ने गर्दछन् । बिस्तारै नयाँ लगानीकर्ताहरु पनि बढ्दै गइरहेका छन् । पछिल्लो समयमा हरेक कम्पनीहरु प्रविधीमैन्त्री तरिकाले अगाडि बढि रहेका छन् । हरेकको पहुँच अनलाईनमा छ । त्यसैले बढेको हुन सक्छ ।
कम्पनीहरु अनलाईन प्रणालीमा गएर पनि सोचेजस्तो प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासाहरु आउँछन् , यस्तो चाहिं किन ?
हामीले ल्याएको यो नयाँ प्रविधी हो । बिचमा डाटा माईग्रेटमा मात्र केहि समस्या आएको थियो तर त्योे अहिले समाधान भइसकेको छ । अनलाईन समस्या भए पनि गुनासाहरु आउने बित्तिकै हामीले समस्या समाधान गरेका छौं । यो केहि ब्यक्तिहरुको हावादारी कुरा मात्र हो । समग्रमा अनलाईनमा केहि समस्या छैन । यसलाई प्रयोग गर्नेहरु सन्तुष्ट नै छन् । प्रयोग र्नै नगर्नेहरुले हल्ला फैलाउने गरेका छन् । कतिपयलाई यो प्रणाली लागु हुँदा आफुलाई असर पर्छ भन्ने लागेर पनि अनलाईन प्रणालीका बारेमा नकारात्मक कुरा गरिरहेको हुनसक्छ ।
भनेपछि अनलाईन प्रणाली ठिकठाक छ । यो प्रणाली लागू हुँदा आफुलाई घाटा पर्छ ठान्ने स्वार्थी समुहले यस्तोे नकरात्मक सन्देश फैलाएका हुन् त ?
यो हुन पनि सक्छ । जो जति अनलाईन प्रणाली प्रयोग गरि रहेका छन् उनीहरु सन्तुष्ट छन् । अनलाईन प्रणली राम्रो हुदै गइरहेको छ भन्छन् । तर, कहिले यसको प्रयोग नगर्नेहरु हल्ला सुनेरै त्यसको पछि दौडिएको पाइन्छ ।
अनलाईन प्रणाली अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको भएन पनि भनिन्छ नी ?
नेपालमा यो प्रणालीको वि.स २०७२ साल देखि बहस हँुदै आएको छ । यहि विषयमा मुद्धा परेर पनि जितिसकेको अवस्था छ । हाम्रो देशमा जे छ त्यसमा सन्तुष्ट हुन सक्नुपर्छ । यस सम्बन्धि सबै निती नियमहरु गरेर अगाडी बढेका छौं ।
बैंकहरुलाई कारोबार गर्न दिने गरि लाईसेन्स दिने कुरा कहाँ पुग्यो ?
यस सम्बन्धि प्रक्रिया पुराएर आए पछि हामीले यो बैंक सक्षम छ है भनेर योग्य पत्र धितो बोर्डलाई पठाउँछौं । बैंकहरुले पहिला त सहायक कम्पनीहरु खोेल्नुप¥यो । राष्ट्र बैकबाट स्विकृती लिनु पर्यो त्यसपछि मात्र तिनिहरुले स्विकृति पाउँछन् । यसमा सबैभन्दा बढि सक्रियता बैंकको नै हुन्छ ।
स्टक डिलरका लागि किन ढिलो भइरहेको छ ?
सम्भवतः यो चाँडै आउँछ । हामी प्रक्रियामा छौं । कार्यबिधी धितोपत्र बोर्ड पनि चाँडै गर्ने प्रयासमा छ । स्टक डिलरको लाईसेन्स लिने प्रक्रियामा छौं ।
मार्जिन ल्याण्डिङ्गको कार्य के भइरहेको छ ?
हामीले यसको प्राविधिक कुरा मिलाउन बाँकी छ । ६ वटा स्टक ब्रोकर कम्पनीले स्विकृति पाईसकेको छ । ब्रोकरहरु पनि आफ्नो तयारी गरि रहेका छन् । उनिहरुको २ दिन भित्र काम सकिन्छ । हामी सबै यसको अन्तिम चरणमा छौं । सम्भवतः १ हप्ता भित्र उनिहरुले काम गर्ने अनुमती पाउँछन् ।
आगामी बजेटमा लगानीकर्ताहरुको हितमा हुनेगरि यहाँहरुले के पहल गर्नुभएको छ ?
नेपालको पँुजी बजारले हिजोका भन्दा आज फड्को मारेको अवस्था छ । आगामी बजेट लगानीकर्ताहरुका लागि सकरात्मक हुने अपेक्षा छ । गत वर्षको बजेट पनि राम्रै थियो र यस वर्ष पनि सम्भवतः बजेटले लगानीकर्तालाई राम्ररी नै सम्बोधन गर्ने र पुँजी बजार व्यवस्थापन गर्नको लागि राम्रै आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तपाई नेप्सेमा गए पछि के के काम भए ? भावी योजना के छन् ?
पहिलाको भन्दा सब–इन्डेस बढेको छ । अहिले १२ वटा इन्डेक्स पुगिसकेका छन् । एकै ठाउँमा भएका विभिन्न कम्पनी तथा बैंकहरुलाई अलग–अलग ग¥यौं । नेप्सेलाई ब्यवस्थित ग¥यौं । पुँजी बजारलाई अनलाईन प्रणालीमा ल्यायौं । लगानीकर्ताले पुँजी बजारमा पार्दशिताका साथ काम गर्न थाले । समस्या सुनुवाईका लागि हटलाईनको व्यवस्था ग¥यौं । यस्तै धेरै काम भएका छन् । पुँजी बिस्तार पनि भईरहेका छन् । अब हामी अनलाईनबाट तिर्ने काम पद्धती गर्दैछौं । नेपालका सबै स्थानिय तहसम्म नेपालको शेयर बजार पु¥याउने हाम्रो उद्धेश्य छ । बिदेशमा बसेका नेपालीहरुलाई पनि नेपाली सेयर बजारमा कारोवार गराउने काम गर्नेछौं ।
अन्तिममा आम–नागरिक तथा लगानीकर्ताहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिला त सेयर लगानी गर्न चाहनेहरुलाई आफु सेयर गर्न खोजेको संस्थाको बारेमा बुझ्न अनुरोध गर्दछु । कस्तो खालको संस्था हो ? कस्तो काम गरि रहेका छ ? आफुले सेयर गर्न खोजेको प्रतिफल के कस्तो छ ?भन्ने लगायतका चिजहरु मुल्याङ्कन तथा योजना गरेर मात्र सेयर खरिद तथा लगानी गर्न अनुरोध गर्दछु । दिर्घकालिन सोच बनाएर लगानी गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्दछु ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ९, २०७६, ०५:२०:००